နေ့: နိုဝင်ဘာလ92019
Lakes Express လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ - Isparta-Izmir (Basmane) လိုင်းဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ပြေးဆွဲမည်။ Lakes Express တွင် 262 ခရီးသည်တင်4လှည်းများရှိသည်။ Isparta Izmir လေကြောင်းလိုင်းများကိုအောက်တိုဘာလတွင်စတင်ခဲ့သည်။ 25 2019 [ပို ... ]
Adana Metro မြေပုံလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနှင့်လမ်းကြောင်းများ - ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခြားအရန်အဆောက်အအုံများနှင့်အဆောက်အအုံများအပါအ ၀ င် 150 resကအကျယ်အ ၀ န်းရှိသောဂိုဒေါင်တစ်ခု။ [ပို ... ]
2012 တွင်ဥပဒေအမှတ် 6360 နှင့်အတူကပ်လျက်ofရိယာ၏နယ်နိမိတ်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့ပြီးကပ်လျက်areaရိယာအတွင်းရှိခရိုင်အရေအတွက်သည် 16 မှ 25 သို့တိုးလာသည်။ Ankara ပြည်နယ်၏လူ ဦး ရေသည် 2013-2018 နှစ်၊ EGO ဘတ်စ်ကားများအကြား9တိုးပွားလာသော်လည်း [ပို ... ]
သမ္မတAktaş Kahraman ကကားမောင်းသူအားဆုချီးမြှင့်ခြင်း၊ Bursa မြို့တော်ဝန် Alinur Aktaşသည်ဘတ်စ်ကားပေါ်၌သွေးအေးအေးဖြင့်ခရီးသည်များကိုချောချောမွေ့မွေ့ထွက်ခွာစေပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးအန္တရာယ်တစ်ခု၏ရှေ့တွင်ဖြတ်သန်းနေစဉ် [ပို ... ]
TCDD တွင်ခန့်အပ်ခံထားရသောသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုTaşımacılık A.Ş. လူမှုရေး ၀ န်ဆောင်မှုဥပဒေနံပါတ် 2828 ၏နယ်ပယ်အတွင်း TCDD Taşımacılık A.Ş. ၏ရာထူးများသို့ပွင့်လင်းစွာခန့်အပ်ခြင်းခံရသူများထံမှတောင်းဆိုထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်၏သတင်းအချက်အလက်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ [ပို ... ]
Adana ရှိ Ceyhan ခရိုင်ရှိသေနတ်တံခါးကိုပိတ်ထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအက်ဒနာခရိုင်၊ အပျော်တမ်းဘောလုံးသမားတစ် ဦး နှင့်မီးရထားလမ်းဖြတ်ကူး။ သေဆုံးသွားသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ထိုအမျိုးသမီးကိုသိရှိခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Adana's Ceyhan ခရိုင်တွင် [ပို ... ]
Mersin Metropolitan Municipality သည်မြို့၏သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သော Mersin Landscape Master Plan ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Mersin Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Vahap Seçer'inသည်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အမြင်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ မြို့တော် [ပို ... ]
mirzmir ရှိရထားဖြင့်သယ်ယူသောခရီးသည်အရေအတွက်သည် 50 သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည် Karşıyaka နှင့် Konak ရထားများသည်တစ်နေ့လျှင် 120 သို့ခရီးသည်တစ်ထောင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ İဇmirရှိရထားလမ်းအများပိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဓိကမှတ်တိုင်တစ်ခု၊ လမ်းရထားဖြင့်သယ်ဆောင်လာသည့်ခရီးသည်အရေအတွက် [ပို ... ]
Izmir Denizli ရထားလက်မှတ်ရစျေးနှုန်း - Izmir Basmane Denizli ဒေသရထားသည် TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့် Basmane မီးရထားဘူတာနှင့် Denizli မီးရထားဘူတာအကြား TCDD ရထားလမ်းပေါ်ရှိ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ဒေသတွင်းရထားဖြစ်သည်။ Izmir နှင့် Denizli အကြား [ပို ... ]
IETT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနနှင့်LÖSEVသည်သွေးကင်ဆာနှင့် ပတ်သက်၍ öသွေးကင်ဆာအပတ်ပါသည့်ကလေးများဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မျက်နှာဖုံး ၀ တ်ဆင်ထားသည့်မန်နေဂျာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများကသတိထားမိသည့်သတင်းစကားကိုပေးခဲ့သည်။ သွေးကင်ဆာသည်သွေးကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်။ ကုသနိုင်သောကုသမှုဖြစ်သည်။ [ပို ... ]